> Resource > Video > Cool Video Editor: Sida loo dar Cool Raadka in Video
Ma jeclaan lahayd inaad ku darto saamaynta qabow iyo siiso Cad ah videos guriga jir taabto dheeraad ah oo iyaga ka dhigaa inay ka sii gaar ah? Dhab ahaantii waxa ay inta badan ka sahlan yahay in aad ka fili karto haddii aad isticmaasho qabow video editor sida Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Waxaa kuu saamaxayaa inaad si fudud u jar videos, ku dar Sheeko codka ama track a music dhawaaqa ka ururinta shakhsi. Waxa kale oo aad ku dari kartaa qaar ka mid ah saamaynta qabow ku haboon si aad u hagaajisid video. Ka dib markii dhowr qasabno, aad video noqon doonaa in ay masterpiece cajiib ah taas oo run ahaantii fantastik ah si ay ula wadaagaan qoyskaaga iyo saaxiibadaa on YouTube ama Facebook. Hadda raac this tallaabo-tallaabo hage ku saabsan sida ay ku darto saamaynta in video isticmaalayn qabow video editor.
Ku rakib iyo abuurtaan Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor). Riix ah "Import" badhanka si aad ku shuban files warbaahinta iyada oo ay guddi dejinta navigation ama si toos ah jiidi oo hoos u faylasha aad maktabadda warbaahinta.
2 Ku dar saamaynta qabow si aad video
Hadda waxaa la gaaray waqtigii ay ku darto saamaynta qabow si aad video. Just dhibicda video iyo files audio ka User ee Album in waqtiyada u dhiganta. Markaas riix "Saamaynta" button in toolbar in ay u baddashaan ah "Saamaynta" tab. Halkan ku saabsan 60 saamaynta qabow yihiin bixisaa si aad u doorato. Waxaad xaq u riixi kartaa saamayn aad jeceshahay dooro codsan. Waxaad arki doonaa "Saamaynta" Timeline muuqan hoos ku track video ah, oo muujinaya ah "E" mark. Haddii aad rabto in la kordhiyo muddada saamayn, kaliya mouse ka badan "E" mark, iyo marka "arrow double" dulqabo u muuqata, waxa jiidin dhererka kasta oo aad rabtid.
Ka sokow in, waxaad ku dari kartaa saamaynta more qabow ay bixiyaan Video Editor. Just muujiyo file bartilmaameedka, xaq guji iyo dooran "Power Tool". Daaqadda pop up ka, waxaad dooran kartaa oo codsan saamaynta more qabow sida Janjeeri-Shift, Muuse, Toos Off ama boodi yaree ee Beat. Saamaynta waxay kaa caawin doonaan jeedi video clip shaqo ka mid ah tahay.
3 dhoofinta aad videos
Waxaad ku eegaan karo iyo daawato aad video adigoo riixaya "Play" button ka hor inta aanad dhoofin. Dib Taga oo qaar ka mid hagaajin loo baahdo. Markaas waxaad badbaadin kartaa oo dhoofin video ah si aad u computer ee "Qaabka" tab. Haddii aad rabto in aad ka ciyaari video on Qalabka telefoonada gacanta, tag "Qalabka" tab iyo dooran qalab ka mid ah liiska. Dabcan, aad si toos ah ayaa sidoo kale ku gubi karaa in DVD ama post on YouTube ama Facebook.
Download this video qabow editor la saamaynta kala duwan oo isku day inaad naftaada!